गर्छ चर्किरहेको साढें क्यासिनो भुक्तानी
ली Davy सुन्नुहुन्छ crickets दिने हुँदासम्म तपाईं को समाचार को विश्व शृंखला पोकर क्षेत्रीय तालिका लागि 2015/16 र निर्णय गर्न यो बनाउन एक वैश्विक भ्रमण । म gazed at the कञ्चन रात आकाश मा चट्याङ बोल्ट कतै बाहिर आए र आसपास sickle आकारको चन्द्रमा । म सोच थियो के को भाग पृथ्वीमा तिनीहरूले झुलसे.यो जादू छ । यो थियो, लास भेगास गर्छ चर्किरहेको साढें क्यासिनो भुक्तानी.
"हामी थाहा छैन, सबैलाई यो गर्न सक्छन् बाहिर गर्न लस भेगास लागि को विश्व शृंखला पोकर." भने WSOP कार्यकारी निर्देशक Ty स्टीवर्ट.उहाँले थिएन lamenting को हानि illuminating बिजुली हमला । बरु उहाँले प्रचार नयाँ तालिका लागि 2015/16 को विश्व शृंखला पोकर सर्किट (WSOPC) – मात्र मौका को लागि केही मानिसहरू अनुभव, ब्रान्ड जीत, एक सुन घन्टी, र एक सीट छ जहाँ एक बाला जलाइएको छ मा एक व्यक्ति हात । It wasn ' t your सामान्य चलान को मिल, पुग्न को लागि रेजर ब्लेड निर्धारित प्रेस विज्ञप्ति जारी । यो एक ऐतिहासिक थियो. It createdastir in one ' s heart.मा पहिलो पटक भ्रमण गरेको 12 वर्षको इतिहास WSOPC थियो वैश्विक छ । युरोपेली पोकर भ्रमण (EPT) र विश्व पोकर भ्रमण (WPT) जाँदै थिए हेर्न अर्को सेट को बुद्धिमानी आँखा । 12 औं मौसम को WSOPC समावेश हुनेछ 19 घरेलू रोकिन्छ र6अन्तर्राष्ट्रिय.तापनि घोषणा छैन, म द्वारा बताउन सक्नुहुन्छ, को टोन ई-मेल म प्राप्त हुनेछ भन्ने थप घटनाहरू जोडी जब यो समय सही छ । मा घरेलू अगाडि, Bally ' s लस भेगास मात्र नयाँ रोक्न । सबै प्रबल मनपर्ने रहन । अन्तर्राष्ट्रिय स्टप मा आयोजित गरिनेछ, इटाली, मेक्सिको र चेक गणतन्त्र, तीन संग, अधिक घटनाहरू अझै नाउँ, संभवतः कारण निरन्तर वार्ता । म आशा Spielbank क्यासिनो बर्लिन मा पाहुना गर्न एक । मात्र अन्य मतभेद सामान्य तालिका को घटनाहरू निम्नानुसार छन्: 1 how do i change my asda वितरण स्लट.
दुई स्वचालित qualifiers from अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू जीत हुनेछ सिट को अन्त गर्न मौसम WSOP वैश्विक क्यासिनो च्याम्पियनशिप जहाँ तिनीहरूले लागि खेल्न हुनेछ जीत मौका $1 मेगा र एक सुन चुरा ।2how do i change my asda क्लिक गर्नुहोस् र सङ्कलन स्लट. कुनै घन्टी विजेता कि छैन लागि योग्य मौसम अन्त्य समापन हुनेछ मौका दिइएको किन्न-मा घटना को लागि $10,000 how do i change my asda आवर्ती स्लट. मुख्य घटनाहरू हुनेछ पुन प्रवेश र खेलाडी हुनेछ अनुमति-प्रविष्ट पुन एक पटक प्रति उडान हुनेछ, दुई उडानहरू, र यसैले खेलाडी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक घटना चार पटक । "यो WSOP क्षेत्रीय जारी हुन एक ठूलो सफलता, दुवै रही नयाँ खेलाडी मा खेल र सिर्जना भोलि गरेको stars." भन्छन् Palansky.कुरा तारा । अब म गरेको छु यो लेखन, म लिन लागिरहेको छु, एक सीट मा मेरो कौसी र हेर्न केही बढी चट्याङ तर्साउनु यो बकवास बाहिर बिरालोहरु र कुकुर । नवीनतम प्राप्त जुवा देखि समाचार केल्विन Ayre.
How do i change my asda क्लिक गर्नुहोस् र सङ्कलन स्लट
Deassert + ड्राइव स्लट मा डरलाग्दो एरे
how do i change my asda वितरण स्लट
how do i change my asda आवर्ती स्लट